အစ္စလမ် စာသင်ကျောင်း ဖျက်မည့် လူစုနှင့် ရဲ ပဋိပက္ခဖြစ် | ဧရာဝတီ
စနေလင်း| February 20, 2013 | Hits:16,429
23 | | ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့က မာန်ပြေ အစ္စလမ် စာသင်ကျောင်းရှေ့တွင် ရဲများက ဒေသခံများကို ရှင်းပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
“ဒီလို ညစဉ်ဖြစ်လာတော့ ကျနော်တို့လည်း ကြောက်လာတယ်။ ကျနော် ကြည့်ရသလောက် ကိုယ့်ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက် သားတွေ မပါဘူး။ ညတိုင်းလည်း အိပ်ရေးပျက်ရတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“ရဲတွေကို ခဲနဲ့ပေါက်တယ်။ ရဲတွေက ဒိုင်းတွေနဲ့ ကာထားတော့ နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲ ထိခဲ့တယ်။ ဒီမနက်တော့ ဘာသံမှ ထပ် မကြားသေးပါဘူး။ အဲဒီအတွက်လည်း ဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ လောလောဆယ် ဘာမှမရှိသေးဘူး။ ရပ်ကွက်မှာတော့ အဲဒီ ရပ်ကွက်က တာဝန်ရှိသူတွေက လုံခြုံရေးအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ လူ ၁၀ ဦးလောက် ဖမ်းထားတယ် ဆိုတာကလည်း ကောလာဟလပါပဲ” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
“ဒီလို လာအော်နေကြတာ ၃ ညတိုင်ပြီ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဆူညံနေကြတာကို မခံနိုင်တော့လို့ ပရိတ်ခွေကို သူတို့ အသံဖုံးတဲ့အထိ ဖွင့်လိုက်ရာကနေ ခဲနဲ့ စပေါက်ကြတာပဲ။ လေးခွနဲ့လည်း ပစ်ကြတယ်။ လုံခြုံရေး ရဲတွေက လိုက်ဖမ်းတော့ ထွက်ပြေးကြတယ်။ ကျနော်ကလည်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်နေတော့ အဲဒီနေရာမှာ ရဲတွေနဲ့ အတူတူ ရှိနေတာ။ ဘာမှတော့ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာ မရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အစ္စလမ် ဘာသာရေးကျောင်းကို အကြီးစားပြင်သဖြင့် ရပ်ကွက်က ကန့်ကွက်
မိတ္ထီလာတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ရာက ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ဖြစ်ပွား
မိတ္ထီလာတွင် ဗလီတချို့ ဘာသာရေးလအမီ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြု
21 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Swe htwe February 20, 2013 - 11:09 pm	Be careful our brothers ! Don’t fallen into the trap of dirty persons. Be cool and calm !
Reply	Shwe Thway February 20, 2013 - 11:21 pm	The Muslims who are the Burmese citizens have the right to practice their faith like the Burmese Buddhists. If we the people do not honor freedom of religion, democracy has no place to grow up in our land. As long as the Muslims do not promote radicalism and terrorism, they must not be bothered and bullied by the Burmese Buddhists. Every citizen has the right to practice his/her faith which includes the right to expand the missions. Government must not promote any religion nor imposeareligion to others.
Reply	aung aung February 22, 2013 - 6:15 pm	yes, it’sagood judgement
Reply	Mrat Linn February 20, 2013 - 11:42 pm	အီရန်နိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားမှာ စိုးရိမ်တာကြောင့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ရောင်းချမှုကို အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင် ရုပ်ပွားတော်တွေကို ရောင်းချတဲ့ ဆိုင်တွေမှ လိုက်လံသိမ်းဆည်းနေတာတွေလည်း သတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့တူအောင် ပြည်သူများကို အသိပေးတဲ့ အနေနဲ့ ရေးပေးပါအုံး။ နို့မဟုတ်ရင် Dorothy K Sayers ရေးတဲ့ HOW FREE IS PRESS အထဲ ပါသွားလိမ့်မယ်။
Reply	THIHA TUN February 21, 2013 - 11:15 pm	Statue of Buddha is regarded asasymbol of peace and serenity in non-Buddhist societies around the world .You can see Buddha’s standing statues made of stones or precious woods in places like hotel lobbies and airlines counters in Asia, America and European .Buddha’s statues are widely sold in Buddhist or non-Buddhist countries as souvenirs or gift items, not as sacred religious items to be worshiped .Isn’t it better to remove Buddha’s statues from marketplace where they are sold commercially inacountry without religion of Buddha?
Reply	sai Suriya February 20, 2013 - 11:50 pm	People must aware that this kinds of racist behavior is against the law of human. Every human has the right to practice and develop their belief. It is against the law of Lord Buddha as well.
Reply	MST February 21, 2013 - 12:41 am	ရှင်းနေတာပဲ။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းမဖြစ် ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ တကယ် အဓိကရုဏ်းဖြစ်လာရင် ဘယ်သူတွေအကျိုးရှိမလဲ။ အစိုးရက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။ အဓိကရုဏ်းတစ်ခုဖြစ်လုိုက်၊ နုိုင်ငံတုိုးတက်မှု နောက်ကျကျန်လုိုက်နဲ့ သံသရာထဲကနေ ထွက်ဖုို့သင့်ပါပြီ။ ကုိုယ်နဲ့ မဆုိုင်ဘူးဆုိုပြီးလဲမနေသင့်ပါဘူး။ တကယ်ဖြစ်လာပြီဆုိုရင် ရုိုက်ခတ်လာမယ့် ဒဏ်က ကုိုယ့်မိသားစု၊ ကုိုယ်စီးပွားရေး၊ ကုိုယ့်လုံခြုံရေးအပေါ်မှာ အများကြီး သက်ရောက်နုိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကနေ အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်မလာအောင် တတ်နုိုင်သမျှ ထိန်းသိမ်းဖုို့လုိုပါတယ်။
Reply	Maung Win February 21, 2013 - 12:52 am	ဥပဒေက ဖျက်ရမှာလား အစွန်းရောက်တွေကဖျက်ရမှာလား? မြန်မာ့ဥပဒေက ဒီလောက်အား နည်းနေတာလား?တမင်အစ္စလာမ်ပပျောက်ရေးစီမံကိန်းလား?
Reply	ဗမာ February 21, 2013 - 9:47 pm	မပူပါနဲ့ မြန်မာပြည်မှာအစ္စလာမ်ပျောက်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။ မြန်မာတပြည်လုံးကို အာဖဂန်နစ္စတန်လိုအသွင်ပြောင်းသွားမှာစိုးလို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဝင်ပါနေကြတာလို့ထင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်နောက်တခုဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ချင်နေကြတဲ့ ဆရာတွေရဲ့ထောင်ချောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျို့။
မြန်မာပြည်သူအားလုံး အဖက်ဖက်မှ သတိတရား လက်ကိုင်ထားကြဖို့လိုပြီ။
Reply	ml February 21, 2013 - 3:40 am	သာကေတမြို့နယ်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်းက ၉ ကျောင်းရှိတယ် ဆိုတော့ အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းကရော၊ ဘယ်နှစ်ကျောင်းရှိသလဲ။ အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းရော ဘယ်နှစ်ကျောင်းရှိသလဲ။ မေးကြည့်တာပါ။ နေရာမလောက်ရင် သူတို့ ကျောင်းတွေမှာ နေရာ ငှားသွားသင်ရင် ကောင်းမလားလို့။
Reply	အောင်တင် February 21, 2013 - 10:21 am	မဖမ်းနဲ့လေ။ ဖမ်းလိုက်ရင် နောက်မလုပ်ရဲဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့။
Reply	aung aung February 22, 2013 - 6:09 pm	aung tin, you have no brain
Reply	Cho February 21, 2013 - 10:56 am	It showed that some of the Myanmar people are not mature, not open enough..does not know how to respect every religion, and each other… Is there anything wrong of praying? Why they pressed on Muslims…THere are good and bad people in all religions…Why they cannot distinguish and see it????
Reply	Min Thuya February 22, 2013 - 4:58 pm	You want to know why?Come here.I will explain in private.You too open?..enought?I am not sure some of myanmar people are mature or not.But,I am sure you are exactly unmature.As your level,you shouldn’t read that kind of news and not qualify to comment in here.And…who is not respect other religion?Who is not respect to the people living on this street / around there and making illegal undercover mosques.Many mosques in Myanmar.Not enought yet?No,mosques in japan.They(democracy country) not allow to build at all.
Reply	ဖိုးလုံး February 25, 2013 - 12:01 pm	Nice job bro!! If they think that our Myanmar people not mature and not respect to their religion, very simple… Lets count how many mosques in our country and lets go and build same number of Buddhist moasteries or pagodas in their Islamic country like Saudi or Pakistan. How?? Will they agree? They are Blind and Stupid right????
Reply	aung aung February 22, 2013 - 6:14 pm	it’sagood point,
Reply	ပီတိ February 21, 2013 - 12:26 pm	I like Irrawaddy news!!!
Reply	thihamin February 22, 2013 - 2:12 pm	အဓိက ကတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာတရားကို ညစ်ထေးသွားအောင်လုပ်တဲ့ တရားခံတွေဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ (ဆော်ဒီ၊ ကူဝိတ်၊ အီရန်…….)က စဒကွာတွေပါဘဲ။
ဆလာမ် ၀ါလေးကွန်းဆိုတဲ့ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ စကားအဓိပ္ပါယ်ကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်း
Reply	တာတေကြီး February 22, 2013 - 9:39 pm	တကယ်မသိလို့မေးပါရစေဗျာ…အဲဒီ “ဆလာမ် ၀ါလေးကွန်း” ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယ်က ဘာတဲ့လဲဟင်???
Reply	Sai Suriya February 23, 2013 - 2:51 pm	Peace be with you. It isanice meaning. Even though I am not muslim, it isagood greeting..
Reply	တာတေကြီး February 25, 2013 - 11:52 am	Thanks. I like this meaning too!! Hope all muslims follow as how they greet each other. Wish peace be with all the peoples around the world!!
အမုန်းစကား ဖြန့်ဝေသူများကို အရေးယူနိုင်မည့် ဥပဒေ ရေးဆွဲ
ရွှေတိဂုံစေတီ ကုန်းမြေဆက်စပ် ဧရိယာအတွင်းရှိ စီမံကိန်းများ လုံးဝဖျက်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆို
ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့ အစည်းအဝေးကြီးက ဘာတွေ ဖြေရှင်းပေးမလဲ
ဟက်ကက်နဲ့ ခင်လေးနွယ် ယုဒသန် ဇနီးမောင်နှံအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကပြမယ်